नेपाल बन्द हुनुमा दलाल सत्ताको हात छः सन्तोष बुढा — OnlineDabali
गिरफ्तार नेता–कार्यकर्तालाई तत्काल नछाडिए कडा संघर्ष
Posted on June 9, 2016 by अनलाइन डबली
पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केद्रीय जनपरिषद प्रमुख
आजको बन्दको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
हाम्रो नेकपा माओवादीले सरकारले बिनाकारण पार्टीका दर्जनभन्दा बढी संख्यामा नेता कार्यकर्ता गिरफतार गरी झुठा मुद्दामा फसाउने काम जारी राखेको हर्कतविरुद्ध आजको दिनमा नेपाल बन्दको आह्वान गरेको साँचो हो ।
बन्द शान्ति पूर्ण हुने कुरामा निर्विवाद छ । बन्द देशभरनै जारी छ । बन्दी बनाइएका हाम्रा सार्थीहरुलाई बिना सर्त रिहा गर्न सरकारसँग पुनः जोडदार माग गर्दछौं ।
बन्द कार्यक्रम अशान्त र तोडफोडकेन्द्रित रह्यो भनिन्छ नि ?
यो कुरा सरकारको रवैयामा भर पर्ने कुरा हो । नेपाल बन्द कार्यक्रम शान्तिपूर्ण र भव्य हुने भन्ने कुरा त पूर्वघोषित विषय हो । तर केही मान्छेले बन्दको सूचना थाहा पाईपाई अवज्ञा गर्ने तरिकाबाट सवारी साधन चलाउने, सरकारका रहेका मुलतः दलालहरुको निर्देशनमा अवज्ञा र उत्तेजित तुल्याउने हर्कत गरिएको छ । यसको घोर भत्सर्ना गर्दछौं ।
बन्दमा अशान्त र तोडफोड गर्ने पार्टीको नीति नै छैन । सरकारले नियोजित रुपमा त्यस ठाउँमा पुर्याउने काम गराएको खण्डमा सरकार स्वयम जिम्मेवार हुने कुरा रह्यो ।
सवारी सधानमाथि तोडफोड गरेकै कारण बन्दकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको प्रशासनको भनाई छ, के भन्नुहुन्छ ?
महिनादेखिको पूर्व सूचनामा पनि अटेर गरेर सवारीसाधन चलाउनेमाथि सार्थीहरुले नचलाउन अनुरोध नै गरिरहेका छन् । बन्द गर्नुको कारणसहित सम्झाईबुझाई गर्दा धेरै महानुभावहरु फिर्ता जाने गरेको समेत पाइएको छ । बन्दका अर्थ सबैले बुझेका छन् । मानिरहेका पनि छन् । नियत नै खराब हुनेसँग के लाग्छ र ।
तर केही मानिस भने देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनतामाथि नांगो हस्तक्षेप भइरहेको विरोधमा, महंगी, काला बजारिया, सत्ताका दलाल, भ्रष्टचारी, कमिशनखोर, तस्करविरुद्ध र जनताको राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको पक्षमा संघर्ष गर्दै आइरहेका नेकपा माओवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने, झुठा मुद्दामा फसाउने, बिनाकारण चरम यातना दिने, जेल हाल्ने जस्ता सरकारको रवैयालाई बुझेर पनि बुझ् पचाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
यो अवस्थामा हामीलाई दुःख लागेको छ । जनताका पक्षमा संघर्ष गरिरहेका जोकोही नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले यातना दिने, अत्याचार गर्ने, जेल हाल्ने काम गर्दा यसको विरोध आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु हरेक नागरिकको न्युनतम कर्तव्य हो ।
आजै बिहान राजधानीमा चालकलाई भित्रै राखेर एउटा ट्याक्सीमाथि बन्दकर्ताले आगो लगाइदियो भन्ने समाचार आइरहेका छन् ? त्यसो गर्न पनि छुट छ ?
मैले पनि त्यो कुरा समाचारबाटै थाहा पाएको हुँ । प्रश्नमा भनेजस्तै भएको हो कि होइन, त्यसबारे सत्यतथ्य त विस्तार आउला । हाम्रो पार्टीको नीति त्यस्तो छैन । हुन पनि सक्दैन । त्यसो भएकै हो भने केही कारण चाहिं हुन सक्छ ।
तर सबैले बुझ्नु पर्ने एउटा गम्भीर कुरा के हो भने बन्दको दिन टयाक्सी किन चलाइयो त ? त्यो त सरासर बन्द अवज्ञा गर्ने नियतले ट्याक्सी चलाएको देखिन्छ । ट्याक्सीवालाले बन्दको सूचना थाहा नपाउने भन्ने पनि हुँदैन होला । त्यसैले यस्तो विषयलाई निरपेक्षा रुपमा बुझ्नु गलत हुन्छ ।
हातमुख जोड्न काम त गर्नै पर्ला नि होइन ?
हामी माओवादी सम्पूर्ण नेपाली जनताको हातमुख जोडन, जनताले स्वाभिमान र स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक लडाई लडिरहेका छौं । यहाँ एक दिनको मात्र समस्या देख्नु गलत हुन्छ । यहाँ त पुस्तौंदेखि शोषित, दमन, अत्याचार, हस्तक्षेप जारी रहेको अवस्था छ । एकदुई दिन गाह्रो सहेर सदाका लागि मुक्ति प्राप्ति गर्ने विषय मुख्य हो ।
अनि नेपाल बन्द कार्यक्रम ल्याउनु हाम्रो रहरको विषय होइन । सरकारले बाध्य पारिएको हो । बन्द कार्यक्रम हुनुमा अहिलेका दलाल सत्ताको मुख्य भूमिका छ । माओवादीको कारणले बन्द भएको होइन । आधारहीन विषयमा माओवादी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरी लगाएर फसाउने काम सरकारले गरेका कारण यसो हुन गएको हो । यो कुरा घामजत्तिकै छर्लङग छ । बन्दको दोष माओवादीको टाउकामा कसैले थोपरेर पार पाइँदैन ।
त्यसकारण सबै पक्ष समयमै समस्याको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाएर समाधानतिर जानुमा नै आम नेपालीको कल्याण हुन्छ भन्ने बुझ्न यति धेरै ढिला किन ?
गिरफ्तार साथीहरुलाई छुटाउन गरिएको बन्द कार्यक्रमबाट झनै धेरै नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका छन् । अब के गर्नु हुन्छ ?
यो सरकारले बुझ्ने विषय हो । हामी त जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्षमै हुन्छौं । गिरफ्तार गरेर, झुठा मद्दा लगाएर, जेलमा कोचेर तह लगाएरै दलाल–सामन्त वर्गको सत्ता चलाइराख्न सकिन्छ भन्ने लाग्या छ भने त्यो उसको लागि अभिसाप मात्र हो ।
सरकारले हामी माओवादीमाथि के के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छौं । घरमा बसिरहेका बेला हाम्रो पोलिटब्यूरो सदस्य ओम पुनलगायत टोलीलाई हिजो साँझ सिन्धुलीबाट गिरफ्तार गरेको छ । के त्यो बन्दको दिन भएको हो ? पटक्कै होइन ।
त्यस्तै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट मात्र पार्टीका ४० भन्दा नेता कर्तालाई प्रहरी लगाएर सरकारले गिरफ्तार गरेको छ । पोखरा, सर्लाही, काभ्रे, बारा, मोरङ, झापा, सुनसरी, कालिकोट लगायत जिल्लाबाट दर्जनौं साथीहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
काठमाडौंबाट शान्तिपूर्ण बन्द कार्यक्रममा रहेका बेला टेड यूनियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र कुमाललगायत साथीहरुको टोलीमाथि धरपकड मच्चाई हिरासतमा राखिएको छ ।
देशभरबाट गिरफ्तार गरिएका साथीहरुको बिनासतै तुरुन्त रिहा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गिरफ्तार गर्नुले सरकार के चाहन्छ भन्ने प्रश्न अगाडि आउँछ । अनाहकमा गरिएको गिरफ्तारको निन्दा गर्न चाहन्छु ।
बन्दपछिको अर्को योजना केही छ ?
नेकपा माओवादी देश र जनताको अधिकारका लागि सधैं संघर्षरत रहँदै आएको छ । यो बन्द केही होइन भनेर जसजसले बुझ्ने कोशिस गर्छ त्यो गम्भीर भूल हो । दलाल–सत्ताधारीले जनताको अधिकार खोस्ने काम जारी राख्छ, दमन बढाउँछ, यातना दिने क्रम रोक्दैन, गिरफ्तार गरेर आतंकित तुल्याइराख्छ, शान्तिपूर्ण वातावरणमा खलबली पैदा गराईरख्छ, आन्दोलनकारीलाई दुश्मनको रुपमा व्यवहार गर्छ भने संघर्ष स्वत कडा बन्दै जान्छ ।
त्यसकारण देशभर बन्दी बनाइएका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बिनासर्त तुरुन्त रिहा गरियोस् । थप आन्दोलनमा जानुपर्ने वातावरण नबनाइयोस् भन्ने दलाल–सत्ताधारीलाई सचेत गराउन चाहन्छु ।
बन्द कति बेलासम्म जारी रहन्छ ?
आज बिहीबार बिहान ३ बजेबाट बेलुका पाँच बजेसम्म कायम रहन्छ । पाँच बजेपछि बन्द कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ ।
तेक्वान्दो महासंघका उपाध्यक्ष गिरी पक्राउ
अखिल क्रान्तिकारीका १२ केन्द्रीय नेता गिरफतार
Posted in डबली वार्ता, देश राजनिति, मुख्य खबर | Tagged santosha budhamagar | Leaveareply